Boorsada, Laptop Bag, Lady boorsadaada, Leather Bag - Kailaien
Garabka The Single Bag
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah wax soo saarka, sida bacaha dhab ah maqaar, bacaha la isku qurxiyo, bacaha PU, sets telefoonka gacanta, dhar, isku sharraxdid, iyo wixii la mid ah. Waxaa ka mid ah dhinacyada kala duwan ee nolosha.
shirkadda oo ku saabsan
Kailaien Baako Quality (Dongguan) Co., Ltd. waxaa ku yaalla Dongguan Guangdong, riyaaqayaa gaadiid ku haboon iyo jawi qurux badan.
Shirkadda Our daboolayaa meel ka mid ah 2500 mitir oo laba jibbaaran oo uu leeyahay in ka badan 95 shaqaale ah iyo in ka badan 5 farsamo. Waxaan ku takhasusay naqshadaynta, ka baaraandegidda oo soo saarta noocyada kala duwan ee bacaha oo ay leeyihiin awood-soo-saarka sanadle ah oo ka badan 3,000,000 oo gogo 'oo bacaha.
Shirkadda Our leeyahay waayo-aragnimo qani ah in industry boorsadaada iyo baakada. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah boorsada, bacda laptop, cover buugga ilmaha, bacda drawstring, bacda gadanaysid iyo bacaha kala duwan Baakadaha gaarka ah ee alaabta elektaroonikada ah. Ka sokow, waxa aan dadaal weyn si ay u horumariyaan waxyaabaha cusub inay buuxiyaan shuruudaha kala duwan.
technology-soo-saarka fiican, si ay u bixiyaan waxyaabaha tayo, si ay kuu siiyaan la pre-iibinta ugu fiican, adeeg-iibka ka dib.
Sida Loo Qaato Boorso
Exhibition Horudhac Milan Interna ...
products waa kala duwan, tayo sare leh, oo ay ku jiraan boorsooyinka, alaabta maqaar, boorsooyinka, suumanka, maqaar telefoonka gacanta, kabaha maqaarka, maqaar iyo wixii la mid ah.
Bacda garabka hal
2 / F, Dhismaha B, No.9 Mingzhu Street, Shima, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong 523731, Shiinaha
Capacity Big biyaha boorsada , boorsada, Dhacdto Sports Bag , Big boorsada, Women boorsada Bag Big Back Pack , Sports Bag ,